Ndị bi na Liechtenstein nwere mmasị na ememe. Na obodo nta a, na mgbakwunye n'ogologo (Afọ Ọhụrụ, Ista, wdg), na-eme ememme "ezumike" ha, bụ ndị metụtara omenala oge ochie - ọbịbịa oge ọhụrụ, okpukpe ma ọ bụ akụkọ ifo.
Ememe ezumike mba kachasị mma - ụbọchị ncheta - na-eme ememe na Liechtenstein na August 15. Tupu ọnụ ụlọ onyeisi na n'ámá obodo, ndị niile bi, ndị nnọchiteanya na ndị njem na-ezukọta. Ememe a ga-emepe site na njiri nke eze na president. Mgbe ha kwusịrị okwu, ụda olu mba ahụ na-ada ụda, ndị òtù ụka na-arụ ọrụ. N'ụbọchị a, a na-ekesa ndị na-agba chaa chaa n'efu na onye ọ bụla, na njedebe nke ememe a na-enye nnukwu ekele.
Ndị Liechtenstein bụ ndị okpukpe. Na kalenda nke ememe nke steeti a, enwere ezumike nke ụka:
Ụbọchị Bertolt - January 2.
Sretenie - na 2 nke February.
Ememme St. Joseph - March 19.
Oge Stivin - December 26.
Iwu na- enye na ọ dịghị onye na-arụ ọrụ n'oge ezumike ndị a nke Liechtenstein. N'obodo ndị dị n'okporo ámá dị iche iche, a na-eme ememe ndị dị egwu, ịgba egwu, na-abụ abụ. Na ụka, malite na isii nke ụtụtụ, a na-ekpe ekpere ekpere, nke ihe niile nwere ike ịme. Na ememe ndị a, ọ bụ omenala ị rịọ mgbaghara site n'aka ndị ikwu maka mkparị na dịka ihe nrịba nke mgbaghara na-eme onyinye dị ụtọ.
Ememe mba nke Liechtenstein
Tụlee ụfọdụ n'ime ememe ndị a kachasị amasị ndị isi nke Liechtenstein:
N'ime ọtụtụ ezumike nke ndị mmadụ na Liechtenstein, Funken und Kühslizontag ghọrọ otu n'ime ndị kachasị ama - ịhapụ oge oyi. A na-eme ememe na Sunday mbụ nke ibu ọnụ tupu Ista. Site na nmalite nke ọchịchịrị n'okporo ámá, ndị bi na ya na-ezukọ ma na-agbanye ọkụ ọkụ. N'ịkụ ọkụ ndị a n'okpuru abụ ndị na-agagharị agagharị, ọgbọ ahụ na-aga n'okporo ámá. Ekwenyere na ụdị dị otú ahụ na-achụpụ ndị ọchịchịrị. Mgbe "nsọ" nke n'okporo ámá ahụ, ndị mmadụ na-ezukọ na-ebili ma na-enwu pyre na ụdị pyramid. N'elu pyramid bu ahihia nke ndi oka ndi oji. Mgbe ire ọkụ na-ere ọkụ, ndị niile na-eme ememe ahụ na-ezukọta na "tebụl dị ụtọ". Ihe a na - eme na ụbọchị taa bụ Kyuali - rectangular sweets.
Ebe ọzọ ezumike ọzọ na Liechtenstein bụ Fasnacht . Nta a, nke a na-eme na Thursday tupu mmalite nke post. Ndị na-etinye ya na uwe ndị ọgọ mmụọ na ihe nkpuchi na ịgba egwú na Gugger. N'obodo ndị dị n'ime obodo, a na-eme ndokwa ejiji.
Alpabfart ghọrọ ezigbo ezumike maka ndị bi na Liechtenstein. Ka oge na-aga, n'oge ụbịa, mgbe ụwa kpuchiri oke oyi, ìgwè ewu na atụrụ si n'ugwu. A na-ewere ụbọchị a ka mmechi nke oge okpomọkụ maka ebe ịta nri. N'anyasị, mgbe ọ na-agba ọchịchịrị, ndị obodo ahụ na-aga izute ndị ọzụzụ atụrụ na atụrụ ha. Umu na ehi n'osisi a kwadoro obi ha na mpi, na n'olu olu. N'agbanyeghị, a pụrụ ịzụta "ihe ịchọ mma" dị iche iche n'ụlọ ahịa ihe ncheta, n'ihi na ndị a bụ otu n'ime ihe ncheta kachasị ewu ewu na Liechtenstein .
Visa ka Denmark
Culture nke Czech Republic
Norway - ihe ncheta
Ebe nkiri Montenegro
Gịnị ga-esi na Switzerland?
Andorra - ezumike
Onye na-edozi ụlọ-nchekwa
Ogologo agbatị ụkwụ ụmụ nwanyị 2015-2016
Suspension Prasicides maka kittens
Kedu ka esi eme ka otutu Clematis cuttings?
Nwee ihe na-egbuke egbuke - ụdị ejiji kachasị mma na ihe ga-eyi ha n'oge a?
Akuku aquarium gourami - usoro nile nke nlekọta na ozuzu
Kedu ka esi eme ihe n'eme?
Igwe na-agba gburugburu
Kedu otu esi edozi oghere na drywall?
Isi ụgbọ mmiri
Ejiji nwanyi baseball 2015
Egburu ihe ngosi nke iri afọ itoolu na mgbasa ozi Giorgio Armani
Akpụ akpụkpọ ụkwụ n'elu ikpo okwu